“Global Futures” – WWF: voadona mafy ny toekarena eto Madagasikara | NewsMada
“Global Futures” – WWF: voadona mafy ny toekarena eto Madagasikara
Iray amin’ireo firenena voa mafy indrindra i Madagasikara mialoha ny taona 2050, raha tsy misy fepetra mazava maharo ny tontolo iainana fa tsy resaka ambony latabatra fotsiny.
Mampilaza mialoha an’i Madagasikara sy firenena 139 hafa ny loza efa mihatra ary mbola hihamafy ny WWF, araka ny tatitra « Global Futures » navoakany, iarahana amin’ny Global Trade Analysis Project an’ny oniversite Purdue sy ny Natural Capital Project an’ny oniversite Minnesota. Oniversite samy any Etazonia avokoa ireo. Any amin’ny sehatry ny toekarena ny tena misy fiantraikany mafy izany, hita sy voaporofo any amin’ny lalam-pihariana maro, toy ny fambolena: tsy ampy ny rano.
Araka ny tatitra « Global Futures », ho very ny 4,2 % amin’ny harinkarena faobe eto Madagasikara mialoha ny taona 2050, raha mitohy izao fahapotehan’ny tontolo iainana izao. Navoitr’ireo mpikaroka ny avy amin’ny zavaboahary andrin’ny toekarena: fanirian’ny zava-maitso, fiarovana ny morontsiraka, loharano, jono an-dranomasina, ary ny tahiry dionarina (carbone). Araka ny tatitra navoaka, ny fahasimban’ny morontsiraka sy ny zavaboahary samihafa (ala, harena anaty ranomasina…) mitentina 479 miliara dolara isan-taona maneran-tany !
Mifanipaka amin’ny vidin’ny gazy
Vahaolana laharam-pahamehana naroson’ny Global Futures ny fahaiza-mitantana ny fiarovana ny tany sy ny zavaboahary sisa tavela. Araka ny tatitra ihany, raha voafehin’ny Malagasy ny fiarovana ny ala, hitombo +1,23 % ny harinkarena faobe. « Miantso fandraisana andraikitra mazava sy maharitra ny WWF ho fanatanterahana izany hahatrarana ny fampandrosoana maharitra », hoy ny talen’ny WWF Madagasikara, Ramahaleo Tiana. Mifanipaka amin’ny fanondrotana 10 % ny vidin’ny gazy vao nampiharina tamin’ity volana febroary 2020 ity anefa izany, ankoatra ny herinaratra tsy ampy sy lafo.